Ndị gọvanọ | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Bodytù Na-achị Isi nke Oakleigh
Onyeisi nke Gotù Na-achị Isi
Onye isi Nkuzi
Rev Shaun Sanders
Gọọmentị Ikike Obodo
Ndị ọrụ Gọvanọ
Bodytù Na-achị Isi na-ahụ maka ịhụ na Schoollọ Akwụkwọ anyị kwekọrọ na ụkpụrụ iwu nke ndị omeiwu na ndị ọrụ obodo (LA) depụtara.
Ọrụ ha bụ maka iwu niile. Azụmaahịa ụbọchị nke ịhazi mmụta ụmụaka na ijikwa oge, ohere, ndị ọrụ na akụrụngwa bụ maka ndị otu ọkachamara nke onye isi nkuzi na-eduzi.
Ya na ndị ọkachamara nọ n'ụlọ akwụkwọ ha na-ekere òkè maka:
Schoolkpụrụ ụlọ akwụkwọ
Uru ọ bara maka ego
Njikwa ya kwesịrị ekwesị
Ọdịmma ya na ndị ọrụ ya na ụmụ akwụkwọ ya
Nkwurịta okwu ya na ndị nne na nna na ọha na eze
Tù na-achị isi ga-ahụrịrị na n'iwepụta ibu ọrụ ya, ọ na-akwalite ma na-echekwa ọdịmma ụmụaka.
Ndị Gọvanọ na-arụ ọrụ site na kọmitii dị iche iche. Mpempe akwụkwọ nke oge nzukọ ha dị n'okpuru.
Register nke Mmasị
Ga ọmụmụ ihe
Nkwupụta ndị Gọvanọ na Akụkọ Mmetụta 2020-21
Ọganihu nke Schoollọ Akwụkwọ
Steve Holt - Oche
ibu ọrụ: Kọmitii na-ahụ maka ego na ndị ọrụ
Akụkụ Mpaghara: Ọrụ Nlekọta Isi nke Onye Isi, Nsonye Schoollọ Akwụkwọ
Kpọtụrụ Email: stephen.holt@oakleigh.barnet.sch.uk
Mụ na ụlọ akwụkwọ ahụ esonyela ọtụtụ afọ, nke mbụ dịka nne ma ọ bụ nna nke nwa m nwoke Ben gara ụlọ akwụkwọ maka afọ 5 tupu ọ nwụọ na 2008. Ntinye aka m n'oge a mekwara ka m sonyere ndị gọvanọ dị ka gọvanọ nne na nna.
Mgbe okwu a gasịrị, ọ dị m ezigbo mkpa ịga n'ihu na-akwado ụlọ akwụkwọ ahụ site n'aka òtù na-achị isi na enwere m ezigbo obi ụtọ ịme ntuli aka dị ka onye isi oche ọhụrụ nke ndị gọvanọ mgbe m jikọtara Gọvanọ maka oge. Nke a enyela m ohere iji kwado ma nyere Onye Isi Nkuzi na ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ aka ịga n'ihu na-eme ka ụlọ akwụkwọ Oakleigh bụrụ ebe pụtara ìhè iji mụta ma kuzie ihe. Na mgbakwunye na ọrụ a abụkwa m onye otu kọmitii na-ahụ maka ego ma na-esonyere ndị ọrụ mgbe niile na ntinye ego.
Arụrụ m Unilever ice cream maka afọ 15 dị ka onye njikwa ahịa mpaghara, a na-akpọkarị ice cream Unilever dị ka ice cream. Ọrụ m n'ime azụmahịa a bụ ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ahụ maka ire ere iji ree ndị na-azụ ahịa nnukwu nnwere onwe ice cream dị ka ogige ntụrụndụ na zoo n'ofe UK. Ọrụ ndị dị mkpa na ọrụ a bụ ihe ndị dị mkpa na arụmọrụ, njikwa mmefu ego, ntọala ebumnuche, ọzụzụ, ihe ndị mmadụ chọrọ na nyocha na nyocha arụmọrụ. Nke a enyela m ahụmịhe na ohere isoro ọtụtụ ụdị mmadụ dị iche iche nwee mkpa, mkpa na nsogbu dị iche iche.
Mmasị na ntụrụndụ
Ihe kachasị amasị m bụ mụ na ezinụlọ m ịnọkọ oge gụnyere nkịta 2 na-eme ụdị ọrụ dị iche iche. Ihe nkiri amateur, Football na Rugby bụkwa nnukwu agụụ na ndụ m. Ekwenyere m nke ọma na ụlọ akwụkwọ Oakleigh ma soro ndị ọrụ nkuzi na-arụ ọrụ iji hụ na nwatakịrị ọ bụla nwere ọ theirụ na ụlọ akwụkwọ Oakleigh na nwata ọ bụla na-etolite n'ikike ha niile.
Gilbert Knight - Onye isi oche
ibu ọrụ: Ego na ndị ọrụ, mlọ, Healthlọ Ọrụ Ahụike na Nchekwa
Akụkụ Mpaghara: Ọzụzụ Gọvanọ, Nzukọ Forumlọ Akwụkwọ Barnet
Abụ m onye na-enyocha akwụkwọ ezumike nká (FRICS) - Abụ m onye na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ mba ụwa nke ndị nyocha 1981-1995. M ọkachamara na njikwa akụ maka azụmahịa maka ego ezumike nka, UK na ndị na-etinye ego na mba ụwa. Ngalaba nke ndị ọrụ 45 na-achịkwa njikwa ego nke ego karịrị £ 40 nde 1995, ihe onwunwe bara uru ihe ruru £ 900 nde (1995). Edere m akwụkwọ ntuziaka maka Ahụike na Nchekwa maka ndị nyocha Chartered. Enwetara m ihe mbụ kọmputa nke Estate Terrier maka ụlọ ọrụ mba ụwa na-etinye atụmatụ na foto na ntụgharị akpaka nke usoro, ụkpụrụ na mpaghara ma ọ bụ asụsụ obodo ma ọ bụ HQ, ego na alaeze ma ọ bụ metric.
Alụrụla m nwanyị na ụmụ nwanyị nwanyị nke ọdụdụ nke ọrịa Angelman. M lụrụ ọgụ ma merie ikpe ikpe ikpe megide Barnet 1998-99. M guzobere Actionmụaka'smụaka iji nyere ndị nne na nna ndị ọzọ aka na SEN na nkwarụ na enyemaka nke Barnet Mencap. A gwara m ka m sonye na kọmitii dị iche iche na-ahụ maka ndị na-eto eto nwere nkwarụ. Akpọrọ m ka m sonyere ndị ọzọ ka ha guzobe Barnet Voluntary Partnership na 2000 iji kpakọrịta ndị isi ndị isi kansụl - Abụ m Onye isi oche ugbu a. Abụ m onye so na Nsonye Strategy Group kemgbe 2003, Mgbanwe mgbanwe otu kemgbe 2006, Nhọrọ Board 2007-2012, na dị iche iche na-arụ ọrụ dị iche iche na kpọmkwem isiokwu.
Adị m Gọvanọ Gọvanọ na Oakleigh kemgbe 1999, Gọvanọ Nne na nna maka oge 2 wee bụrụ Gọvanọ Obodo. Oche ebe 2007/8 ruo 2017. Abụ m Onye otu Barnet Schools Forum kemgbe 2007 na Onye isi oche maka afọ 7 gara aga.
Ruth Harding - Onye Isi Nkuzi
ibu ọrụ: Ego na ndị ọrụ, ogige, Health & Safety na Kọmitii Mmelite andlọ Akwụkwọ
Arụrụ m ọrụ na Oakleigh School kemgbe 1994. N'ime oge m na-arụ ọrụ, enwere m ọrụ maka iduga Autism ma bụrụ onye na-enyere aka na-elekọta Acorn site na 2005. N'oge m nọ na Acorn ọ gbasaa iji tinye Acorn na saịtị nke inlọ Akwụkwọ Colindale. Nke a bụ ihe ọ excitingụ na ihe ịma aka. M sonyeere n’ Gotù Na-achị Isi na Septemba 2013 ebe m nọdụrụ ala na Ndozi akwụkwọ.
Na Septemba 2015, amalitere m ịma aka nke Onye isi Nkụzi na-arụ ọrụ ebe m mikpuru onwe m n'ọrụ ahụ ma setịpụ atụmanya dị elu na ụmụaka niile nọ na Oakleigh ga-enweta nkuzi pụtara ìhè, ebe m nwere mmasị na nke a. Na Septemba 2017, abụrụ m onye isi na-agba mbọ na m ga-eme ka Oakleigh pụta ìhè.
Rev Shaun Sanders - Gọvanọ na-akwado
ibu ọrụ: Mgbakọ & Kọmitii na Ahụike na Nchekwa
Mpaghara Igodo: Mmụọ, Omume, Social na Cultural Development (SMSC)
Abụ m onye minista nke Chọọchị Metọdist Manor Drive nke dị n'akụkụ nkuku site na Oakleigh School ma nwee njikọ ogologo oge na ụlọ akwụkwọ ahụ. Abụkwa m onye ozi nke ụka ụka Metọdist na East Barnet, High Barnet na Hendon - mana ọ bụghị n'onwe m! Ana m ekerịta ya na onye ozi ọzọ na ọtụtụ ndị nkịtị. Ọ bụ ihe ùgwù na ọrụ m na-eme ka m kpọtụrụ ọtụtụ ndị na-adọrọ mmasị ma ndị obodo.
Na mbụ abụwo m onye nlekọta na Milton Keynes, Hackney na Golders Green. M tolitere na Cornwall ebe m hụrụ otu nwa nwanne nwanne m si rite uru dị mma nke ụlọ akwụkwọ pụrụ iche. Achọrọ m ịkwado ụlọ akwụkwọ yiri nke ahụ n'ime obodo ebe m bi ugbu a.
N'oge m nwere ohere, enwere m mmasị n'ịgụ akwụkwọ, foto na ịgagharị.
Jackie Silverman - Co-opted Gọvanọ
Akụkụ Mpaghara: Ọrụ Nlekọta Isi nke Onye Isi, Nchebe (gụnyere CP), na Ego Ulo Ozo
M ruru eru dị ka onye na-elekọta mmadụ na 1977 wee malite ọrụ m na Royal Free Hospital, na-enwekarị mmasị na-arụ ọrụ mgbe niile na ụmụaka na ezinụlọ. Mgbe ụmụ nke m bịarutere, arụrụ m ọrụ maka Bureaulọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndụmọdụ Citizens na New Barnet, biri na Paris maka afọ 3 wee banye na 1989, sonyeere Barnet Mencap dị ka onye ọrụ Nkwado Ezinyere iji chọpụta mkpa ezinụlọ na ụmụntakịrị na ịmalite ọrụ maka ha. Anọ m na Barnet Mencap ruo afọ 24! N'oge ahụ, etinyere m ọrụ Open Door maka n'okpuru 5s na ezinụlọ ha na ọrụ Nkwado Ezinụlọ maka ndị nne na nna karịrị 5s kwa, bụrụ onye njikwa ọrụ ahụ mana na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ezinụlọ ozugbo. Enwere m ọrụ, dị ka akụkụ nke ndị isi njikwa ọrụ, maka mbanye, mmefu ego, nyocha ndị ọrụ na nlekọta wdg.
Site na ọrụ m, amatara m Oakleigh School, ndị ọrụ na otu ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọta akara nke ọma na Open Door Fun Days enwere n'ụlọ akwụkwọ ahụ ọtụtụ afọ. Ndị ọrụ ahụ na-akụ m mgbe niile dị ka otu ìgwè dị egwu nke ndị nwere ahụmịhe, ndị na-akwado ma nwee ezigbo mmadụ ndị nwere ụzọ zuru oke nke iso ụmụaka na ezinụlọ ha na-arụ ọrụ. Mụ na ọtụtụ ndị ezinụlọ arụkọ ọrụ ma ha achọghị ịhapụ Oakleigh! Adịghị m ala azụ mgbe a gwara m ka m sonyere Bodytù Na-achị Isi n'ihi na ọ na-atọ m ụtọ mgbe ọ bụla m gara ụlọ akwụkwọ. Enwere m olileanya na m ga-ewetara ndị otu ezigbo ịnụ ọkụ n'obi maka ihe niile Oakleigh na-enye, yana ahụmịhe m kemgbe ọtụtụ afọ.
Adịpụrụ m n'oge na-adịbeghị anya na Barnet SENDIASS - mana m ka na-enyere aka ebe ahụ na ikike afọ ofufo.
Moira Newton - Gọvanọ kwadoro
ibu ọrụ: Mgbakọ, Health & Safety na Kọmitii Mmelite Schoollọ Akwụkwọ
Mpaghara Igodo: Ọrụ Nlekọta Onye Isi Nkụzi, Egwuregwu Egwuregwu & Egwuregwu
Adị m Co na opted Gọvanọ kemgbe June 2016. Site na ọrụ m Physiotherapist, na m lara ezumike nká na December 2015. Arụrụ m ọrụ na Health Service ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 45. N'oge m na-arụ ọrụ, e were m n'ọrụ na Mahadum Mahadum Mahadum na Barnet General Hospital. Na 1981 amalitere m ịrụ ọrụ na Oakleigh School (n'oge ahụ a maara ya dị ka Friern Barnet School) wee rụọ ọrụ na-aga n'ihu ruo mgbe m lara ezumike nká. N'afọ ndị ahụ ahụrụ m ọtụtụ mgbanwe na agụmakwụkwọ na Health Health, enwere m nnukwu ihe ùgwù nke ịbụ akụkụ nke Ezinaụlọ Oakleigh, na iso otu ọtụtụ ndị ọrụ dị egwu na ndị raara onwe ha nye rụkọọ ọrụ. Enwere m mmetụta miri emi banyere inyere ụmụaka niile aka imezu ikike ha, ma nwee mmetụta siri ike na usoro ọgwụgwọ niile bụ ohere mmụta.
Ihe kacha amasị m bụ Ahụike na Nchekwa yana Schoolga n'ihu Improlọ Akwụkwọ. Enwere m ụmụ atọ tolitere na ụmụ ụmụ mara mma abụọ. N'oge m nwere ohere, ana m arụ ọrụ afọ ofufo na North London Hospice, na The Jewish Museum na Camden Town. Kemgbe m lara ezumike nka, m na-eji usoro iku ume m akwado ndi okenye n’ulo nlekọta.
Enwere m mmasị ịgagharị, enweela m ọ veryụ ịga leta partnershiplọ Akwụkwọ mmekọrịta Oakleigh na Zambia. Enwere m nri na ntụrụndụ. Abụ m onye na-egwu ihe nkiri na-anụ ọkụ n'obi, na-abụ abụ n'otu ukwe. Ebe ọ bụ na m bụ akụkụ dị mkpa nke aklọ Akwụkwọ Oakleigh ruo ọtụtụ afọ, echere m na m nwere ike ịbụ Gọvanọ dị mma nke Olọ Akwụkwọ Oakleigh.
Cllr. Sachin Rajput - Gọvanọ Nchịkwa Obodo
ibu ọrụ: Kọmitii Ego
Abụwo m gọvanọ ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ dị iche iche na London Borough nke Barnet kemgbe 2001.
Abụrụla m gọvanọ na Oakleigh School ruo ihe karịrị afọ iri ugbu a ma nwee nnukwu obi ụtọ ijere ụlọ akwụkwọ pụrụ iche, akpọrọ ihe na nke pụrụ iche. E wezụga ọrụ m dị ka gọvanọ m bụkwa onye kansụl na onye ọka iwu.
Sameerah Siddiqu - Gọvanọ Nna
ibu ọrụ: Mlọ, Committeelọ Ọrụ Ahụ Ike na Nchekwa & Afọ Otu Afọ
Mgbe m hapụsịrị Mahadum na BA na Economics na Statistics, esonyere m na KPMG na Abu Dhabi dị ka onye nyocha ụlọ ọrụ mana ọ bụ ihe doro anya ọbụlagodi na enwere m obi ụtọ iso ndị mmadụ na-emekọrịta ihe karịa akwụkwọ ndekọ ego na nke ahụ bụ mmalite nke ọrụ magburu onwe ya nke gbasara naanị ntakịrị n'okpuru afọ 20!
M sonyeere Ziff Davis Middle East, otu n'ime ụlọ obibi akwụkwọ IT kachasị ukwuu n'ụwa dịka Onye njikwa Akaụntụ ma nwee mmasị n'ịmụ banyere arụmọrụ nke ụlọ ọrụ ọhụrụ yana ijikwa ndị ahịa n'ihe karịrị mba 60 na Middle na Near East. Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 3 na ngalaba IT, esonyere m na The Forbes Group na ụdị ọrụ ahụ mana ọzọ gburugburu ebe obibi na-azụ ahịa karịa teknụzụ - ọ masịrị m ịmụ ihe ọhụrụ!
Oge na - enye ọ excitingụ na Teradata Corporation dị ka onye na - ahụ maka ire ahia na mmekọrịta ọha na eze na Northern Europe abụghị naanị nyere m ohere ịmụ ihe ọhụụ kama iji ikike m na ijikwa ndị nwere agbụrụ na agbụrụ dị iche iche na-arụkọ ọrụ ọnụ dịka otu ma nweta ebumnuche ebumnuche. iji nweta ozi anyị na ọkwa mgbasa ozi dị iche iche, mbipụta na blọọgụ na Northern Europe.
Adị m nwa oge ugbu a nwa m nwanyị Ariana nọ na Acorn ma enwere m ike ikwu n'eziokwu, nke a bụ ọrụ kachasị mma!
Nabil Dar - Gọvanọ Nne na Nna
ibu ọrụ: Kọmitii Ego na Ndị Ọrụ
M sonyeere ndị gọvanọ na Oakleigh na 2020, ma abụkwa nne na nna na ụlọ akwụkwọ ahụ. M nwere mgbọrọgwụ miri emi na mpaghara, etolitere ma gaa ụlọ akwụkwọ na mpaghara.
Mgbe m kwagara ịgụ Economics na Mahadum Cambridge, alaghachiri m London wee banye ụwa ọrụ dịka Onye Nlekọta Nlekọta, ọkachamara na Strategy na Commercial Due Diligence ohere. Mgbe m nwetachara ụfọdụ ọrụ dị oke ọnụ (ma weghara ihe karịrị izu ole na ole iji were 100 awa!), Agara m gafere ọrụ Strategy na Virgin Media ebe m rụrụ ọrụ dịka onye ndụmọdụ maka CEO na CFO, na-ebute ọtụtụ okwu ma na-eduga otutu oru ngo iji nyere aka mee ka uzo di ogologo ahia. Emechara m kwaga gafee ọrụ m ugbu a ebe m na-arụ ọrụ atụmatụ atụmatụ na GoCardless, FinTech nke London, na-achọ itinye ụkpụrụ maka ọdịnihu ụlọ ọrụ ahụ ka ọ na-eleba anya na-abawanye ma gbasaa mba ụwa.
Ewezuga mpempe akwụkwọ, m bụ onye nwere mmasị na ihe niile egwuregwu na teknụzụ. Enwekwara m anụ ahụ ọfụma na-adịghị mma maka ajụjụ na enweghị isi. Dị ka nne ma ọ bụ nna nye ụmụ nwoke abụọ nwere mkpa ọzọ, enwere m obi ụtọ inye ụmụ anyị usoro kachasị mma iji nwee ọganihu ma nwee olile anya inyere ndị gọvanọ aka iduzi ụlọ akwụkwọ ahụ n'ịnọgide na-enye nke a.
Rachel Preston - Gọvanọ ndị ọrụ
Mmasị m ịghọ onye nkuzi malitere mgbe m na-arụ ọrụ dị ka onye nkuzi nkuzi na Mapledown School, ụlọ akwụkwọ sekọndrị maka ụmụaka nwere Mkpa Mmụta Pụrụ Iche. Oge m nọrọ ebe ahụ kpaliri m mezue PGCE m. Mgbe m gụsịrị ọzụzụ onye nkụzi m, esonyere m na Oakleigh School dị ka Onye Ọzụzụ Nkuzi Ọhụrụ na Septemba 2011.
Mgbe m nọ na Oakleigh, enyerela m ọtụtụ ohere dị egwu iji zụlite gụnyere ijikwa ngalaba n'ime ụlọ akwụkwọ ahụ, na-emecha nke abụọ na Onye Isi Obodo ebe m rụrụ ọrụ dị ka Autism Advisory Teacher maka Autism na Barnet.
N'oge a, agụchaala m Nna-ukwu na Mmụta Pụrụ Iche, nke mere ka m nwee ike mewanyewanye ihe ọmụma m, nkà na nghọta m na-arụ ọrụ na ụmụaka na ndị toro eto nwere mkpa mmụta pụrụ iche (SEN). Comingghọ onye isi ụlọ akwụkwọ na-enyere aka, onye na-ahụ maka ijikwa Acorn, bụ otu n'ime akụkụ kachasị sie ike ma na-akwụghachi ụgwọ ọrụ m. Enwere m obi ụtọ nke ukwuu ịbụ akụkụ nke nzukọ na-akwado nkwado ma na-enwe ohere iji soro ọtụtụ ezinụlọ, ụmụaka na ndị ọrụ mara mma na-arụ ọrụ.
Obi dị m ezigbo ụtọ na m ga-ewere ọrụ ọhụrụ dị ka onye ọrụ gọọmentị na Oakleigh School, ebe m ga-anọgide na-akwado ụlọ akwụkwọ ahụ na-enye ụmụaka niile ohere bara uru, na-akpali akpali ma na-enye obi ụtọ.
Jane Nicklin - Co-opted Gọvanọ
Abụwo m onye osote onye ọchịchị kemgbe Septemba 2018. Site na ọrụ abụ m onye nkuzi. Arụrụ m ọrụ na Oakleigh na Acorn kemgbe afọ 20. Abụ m onye na-arụsi ọrụ ike na Palọ Akwụkwọ rentlọ Akwụkwọ ma na-enwe obi ụtọ isonye n'akụkụ niile nke ndụ ụlọ akwụkwọ. Arụrụ m ọrụ n'akụkụ ihe nkiri na ndị na-ahụ maka egwu na-akwado ọrụ ezinụlọ na-agwọ ọrịa nke m na-aga n'ihu na-eme n'ehihie kwa izu na Drama therapist. Mụ na onye na-akụ egwu na onye na-eme ihe nkiri na-agba ọsọ na-agba ọsọ oge mmemme maka ndị ọrụ klaasị. Anọ m na-arụ ọrụ na-elekọta Acorn LSA. N'oge m dị ka onye nkuzi oge niile enwere m ibu ọrụ maka History, Geography and Behaviour.
Ọ na-atọ m ụtọ mgbe niile ịme ihe ọmụmụ dị mkpa, nke nwere ike ịba uru ma nwee nzube nye ụmụaka anyị na-enyere ha aka ịgbasa ahụmịhe ha na ịzụlite ọdịmma ha. Ahụwo m afọ ole na ole ka Oakleigh na Acorn nakweere echiche ọhụrụ na ụzọ ọrụ ma mee ka ha rụọ ọrụ maka ụmụ anyị.
Eso m na ntọala ụlọ akwụkwọ anyị na ụlọ akwụkwọ dị na Zambia ma nwee ihe ùgwù iso onye nkụzi na-arụ ọrụ ahụ na nleta mbụ anyị Zambia. Enwere m ike ịnabata ụfọdụ ndị nkuzi nleta mgbe ha bịara leta anyị ma mụtakwuo banyere ihe ịma aka nke agụmakwụkwọ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa.
Oakleigh na Acorn abụwo akụkụ dị mkpa nke ndụ m. Amaara m ma soro ụmụ dị ịrịba ama na ezinụlọ ha rụọ ọrụ. Na klaasị mụ na ndị ọrụ ibe m nwere nkà na ndị nwere ọgụgụ isi arụ ọrụ wee nwee afọ ojuju nke ịnọ na otu dị irè. Obi dịkwa m ụtọ na mụ na ndị ọkachamara si n’ọzụzụ metụtara ya na-emekọ ihe ọnụ.
Nikki Bennet - Gọvanọ kwadoro
Adị m ezumike nká pediatric physiotherapist. Arụrụ m ọrụ na NHS ma dị ka onye dibịa na onye njikwa na Haringey na Barnet. N'ime oge m na-arụ ọrụ na Barnet enwere m ezigbo mmekọrịta na ụlọ akwụkwọ pụrụ iche niile dị na mpaghara ahụ gụnyere Oakleigh, enwere m obi ụtọ isonyere ndị gọvanọ ma nọgide na-enwe mmasị miri emi maka ụmụaka nwere SEN / nkwarụ ma na-akwado n'ụzọ ụfọdụ iji gbalịsie ike maka ha ya na ezi-na-ụlọ ha ka ha nweta ohere kacha mma na ndụ.
N'ime ọrụ m na-arụ ọrụ, mụ na ụfọdụ ụmụaka dị ịtụnanya na ezinụlọ ha rụkọrọ ọrụ n'oge dị mma na nke ọjọọ, yana ịhụ ọtụtụ mgbanwe na mmepe ọfụma na nke na-adịghị mma n'ime ahụike, agụmakwụkwọ na usoro nlekọta mmadụ.
N'èzí ọrụ m na-etinye aka na akụkụ ndị ọzọ nke ọrụ afọ ofufo na-akwado ndị mmadụ, na-etinye aka na nchịkọta ego, melite usoro mmụta na ebe m nwere oge ka ukwuu enwere m na afọ ole na ole gara aga enwewo m ike wepụta onwe m na Noah's Ark Children's Hospice .
Ọ na-atọ m ụtọ ịhụ ka ndị ọzọ gbara m gburugburu ka ha na-etolite yana na-enyere ndị dara ogbenye aka karịa m n'ọtụtụ ụzọ. Mgbe njem ezinụlọ nke mere ka anyị gaa Belarus, anyị guzobere otu ọrụ ebere na-akwado obodo ebe ahụ na mbụ kemgbe 2013 na Western Ukraine. N'ime afọ 5 gara aga, anyị ewerela ndị ntorobịa UK, zụọ ha na UK ma ha eduga ogige ogige oge okpomọkụ. Thezọ mmepe nke ndị isi UK na ndị isi Ukraine abụwo ihe ịtụnanya.
Enwere m agụụ maka njem na ịgagharị ọdịbendị dị iche iche, yana ịhụnanya isi nri. Anọla m na mpaghara ebe niile ma banye n'ụlọ akwụkwọ Oakleigh maka ahụmịhe ọrụ ụbọchị m n'ụlọ akwụkwọ.
Enwere m otu nwa nwanyị dị ịtụnanya ma enwere m mmasị ịnọnyere ya na di m.
Emelitere: Jenụwarị 2021